Fri, May 25, 2018 | 01:31:31 NST
धनुषाः मिथिला बिहारी नगरपालिकामा एमाले विजयी
धनुषा, असोज ६ – धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । मेयरमा एमालेका अनिल यादव ३ हजार २ सय ४२ मतसहित विजयी हुनुभयो ।
पर्सा : छिपहरमाई गाउँपालिकामा माओवादी विजयी
पर्सा, असोज ६ – पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । अध्यक्षमा माओवादीका मनोज गुप्ताले २ हजार ८ सय ५१ मत ल्याउनुभयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सिहासन कलबारको २ हजार ६ सय ९४ मत आएको छ ।
काठमाडौं, असोज ६ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्मको मत परिणाम यस्तो छ।
महोत्तरीः रामगोपालपुरमा माओवादी विजयी
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । मेयरमा माओवदीका अशोक मण्डल २ हजार ९ सय ४४ मतसहित विजयी हुनुभएको हो । उहाँका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका राजाराम यादवले २ हजार ७ सय ५९ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
बसवरिया गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा राजपा विजयी
सर्लाही, असोज ६ – सर्लाहीको बसवरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ ।
सिरहाः धनगढीमाईमा माओवादी विजयी
सिरहा, असोज ६ – सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । मेयरमा माओवादीका हरिनारायण चौधरी ५ हजार ६ सय ८३ मतसहित विजयी हुनु भएको हो ।
सिरहाः सखुवा नन्कारकट्टीमा एमाले विजयी
सिरहा, असोज ६ – सिरहाको सखुवा नन्कारकट्टी गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका केदारनाथ यादव विजयी हुनुभएको हो ।
बाराका दुई उपमहानगरको पछिल्लो अवस्था
बारा, असोज ६ – बाराका दुई उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ ।
पर्साः पर्सागढी नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
पर्सा, असोज ६ – पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका विजयी भएको छ ।
महोत्तरीः मटिहानी नगरपालिकामा राजपा विजयी
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा विजयी भएको छ । राजपाबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका पूर्वसभापति हरिप्रसाद मण्डल मटिहानी नगरपालिकाका मेयरमा विजयी हुनुभएको हो ।
अहिलेसम्म कुन स्थानीय तहमा कसले जिते ?
काठमाडौं, असोज ६ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म ४६ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ : ४६ स्थानीय तहको नतिजा
​धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
धनुषा, असोज ६ – धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ ।
बारा, असोज ६ – बाराको निजगढ नगरपालिकाको मेयरमामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका सुरेश खनाल ७ हजार ६४८ मतप्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ ।
सिरहा, असोज ६ – सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका सूर्यानाथ मण्डल विजयी हुनु भएको छ ।
रौतहट, असोज ६ – रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार रामचन्द्र चौधरी विजयी हुनुभयो भने उपमेयरमा एमालेकी रामरती चौधरी विजयी हुनुभयो ।
सिरहा, असोज ६ – सिरहाको नरहा गाउँपालिकामा एमालेका रामशरण यादव १६ सय ५६ मतसहित विजयी हुनु भएको छ ।
महोत्तरी : औरही नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस, उपमेयरमा राजपा विजयी
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरीको औरही नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा विजयी भएको छ ।
राैतहट : गढीमाई नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
राैतहट, असोज ६ – राैतहटको गढीमाई नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले मेयर र उपमेयर दुबै पद जितेको छ ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा फोरम नेपाल विजयी
सप्तरी, असोज ६ – सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल विजयी भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा फोरम नेपालका हेमन्तकुमार बहरखेर २ हजार ९ सय ४२ मतसहित विजयी हुनुभएको छ ।
​सिरहा : मिर्चैया नगरपालिकामा माओवादी विजयी
सिरहा, असोज ६ – सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पद दुबैमा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ ।
सप्तरीको रुपनीमा राजपा विजयी
सप्तरी, असोज ६ – सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा राजपा विजयी भएको छ । राजपाको अध्यक्षका उम्मेदवार हरेराम यादव ४ हजार ६८ मतसहित विजयी हुनु भएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामनारायण इसरले २ हजार ९ सय ७१ मत पाउनुयो ।
प्रदेश नम्बर २ : ३५ स्थानीय तहको नतिजा
काठमाडौं, असोज ६ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरको पछिल्लो मत परिणाम
पर्सा, असोज ६ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेस अघि छ । ८४ हजार भन्दा बढी मत खसेकोमा १८ हजार ९ सय १९ मत गन्दा कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ ।
बाराको पचरौताको मेयरमा फोरम नेपाल र उपमेयरमा राजपा विजयी
बारा, असोज ६ – बाराको पचरौता नगरपालिकाको मेयरमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र उपमेयरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
सर्लाही, असोज ६ – सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा कांग्रेसका सीयाराम राम ३ हजार ७ सय ५३ मतसहित विजयी हुनुभएको हो ।
सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकामा राजपा विजयी
सर्लाही, असोज ६ – सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा विजयी भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा राजपाका विनोदकुमार साह ४ हजार २ सय ३७ मतसहित विजयी हुनुभएको हो ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा संघीय फोरम विजयी
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल विजयी भएको छ । मेयरमा फोरम नेपालका राजकुमार यादव ४ हजार १ सय ३२ मत हासिल गरी विजयी हुनभएको हो ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका माओवादीको विजयी
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरीको प्रमुख व्यापारी केन्द्र एवम् नगरउन्मुख क्षेत्रको रुपमा परिचित रहेको गौशाला नगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ ।
महोत्तरीमा राजपाको अग्रता कायमै
महोत्तरी, असोज ५ – पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार महोत्तरीमा राजपा अग्रस्थानमा देखिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले दिएको जानकारी अनुसार राजपा सवैभन्दा बढी ६, नेपाली कांग्रेस ४, नेकपा माओवादी केन्द्र ३, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १ र स्वतन्त्रका उम्मेदवार १ स्थान अघि छन् ।
काठमाडौं, असोज ५ – तेस्रो चरणको असोज २ गते चुनाव सम्पन्न भएको प्रदेश नं २ को आठ जिल्लाका १३५ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३० वटा स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
पर्सा, असोज ५ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेस अघि छ । कांग्रेसलाई राजपाले पछ्याइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ : ३० स्थानीय तहको नतिजा, को कहाँ विजयी ?
काठमाडौं, असोज ५ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म ३० स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाल संघीय समाजवादीले प्रमुख पद जितेका छन् ।
जनकपुर, असोज ५ – धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । कांग्रेसका बद्रीनारायण सिंह २ हजार ४ सय २० मत ल्याई गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै रामवतीदेवी मण्डल २ हजार ३ सय २७ ल्याएर विजयी हुनुभएको छ ।
१ मतले कांग्रेसले जितेपछि माओवादीको अवरोध, निर्वाचन अधिकृत मतगणना स्थलबाट वेपत्ता
गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा कांग्रेसका उम्मेदवार एक मत अन्तरले विजयी भएको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले बुधबार बिहानदेखि अवरोध गरेको मतगणना अझै शुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचन अधिकृत नविनकुमार जोशी मतगणना स्थल छाडेर वेपत्ता भएका छन् ।
महोत्तरी गाउँपालिकामा राजपा विजयी
महोत्तरी, असोज ५ – महोत्तरी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) विजयी भएको छ ।
नेपाल संघीय समाजवादीले पनि जित्यो गाउँपालिका, नथुनी कुशवाहा विजयी
पर्सा, असोज ५ – पर्साको कालीकामाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी विजयी भएको छ । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका नेता नथुनी कुशवाहा जनता दलको चुनाव चिन्ह पाङ्ग्राबाट चुनावमा उठ्नुभएको थियो ।
२७ वटा स्थानीय तहसहित ५९५ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक
काठमाडौं, असोज ५ – यही असोज २ गते चुनाव सम्पन्न भएका प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३५ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म २७ वटा स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ : एमालेभन्दा माओवादी अघि, कसले कहाँ कहाँ जिते ?
प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म २७ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकले प्रमुखमा जितेका छन् ।